Wenzhou Weihang Plastic Co., Ltd. kuyinto professional wahlanganyela ibhande inayiloni, engagqwali uthayi uthayi ipuleti uthayi bead uhlobo, inombolo tube, ipayipi, ifilimu, fastener, nail omfisha, ezimbili amandla switch, ombaxambili ukudluliswa othomathikhi imikhiqizo switch R & D, ukukhiqiza kanye yokuthengisa kwelinye amabhizinisi. Futhi ukusungula ubudlelwano eside ozinzile wokubambisana ngenombolo Retailers namanxusa. Inkampani enkulu umjovo udini umshini, emaphaketheni imishini, ukukhiqizwa izinto zobuchwepheshe obuphambili, imishini yokuhlola, namandla aqinile lobuchwepheshe, imikhiqizo lithunyelwa Europe, e-United States, eMpumalanga Ephakathi nakwamanye amazwe kanye izifunda.
Le nkampani ngokukhethekile ukukhiqizwa yokusebenza lokushisa inayiloni tape: -20 degrees Celsius ukuba +80 DEG C (inayiloni 66). Nge ngcono okuqhubekayo we indaba uzokwazi ukwenza inayiloni wayibhinca lokushisa ongaphakeme -40. Nge acid, alikhali, cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi flame, ukuqina, ukwahlukanisa kanye nezinye izinzuzo. Imikhiqizo kabanzi yangaphakathi ifektri electronic, ukugoqa TV, ikhompyutha ikhebula, ukukhanyisa, ikhebula uthayi umugqa, angasetshenziswa ngokokuhlobisa ingaphakathi, ingadi yokubopha izimvu, umkhumbi ikhebula yangaphakathi nenkanuko edlulele, ibhayisikili noma imoto nokupakisha ukugoqa nezinye izinto angasetshenziswa ngoba ezolimo, ukulima, yezandla kanye nezinye izinto izikhwebu. Umkhiqizo sinezici okusheshayo esibophezelayo, ukwahlukanisa okuhle, self ukukhiya, kulula ukuyisebenzisa futhi njalo. Iba inqwaba amabhizinisi, amabhizinisi ukuthenga imikhiqizo efanayo ngoba bethanda, kodwa futhi inani elikhulu ezinkulu ukungena e-United States nakwamanye amazwe athuthukile.
Izinkampani sinamathela 'nezwe, futhi ikhasimende win win "ibhizinisi ifilosofi, njalo banamathele" ukubaluleka inkampani asezingeni elifanele, ukusebenza kahle eliphezulu futhi eziphansi "ikhasimende lokucabanga nzulu, futhi ngamandla ukwandisa izimakethe zasekhaya nasemazweni angaphandle, isungule inethiwekhi yokuthengisa uhlelo service kwamakhasimende kuleli zwe, idolobha, imikhiqizo lithunyelwa mpumalanga ye-Asia, e-Europe ne-United States nakwamanye amazwe kanye izifunda, isabelo emakethe futhi ulinganisele yokuthengisa ukwanda kwaqhubeka avuke kancane kancane, sibamukele ngemfudumalo ezintsha nezindala amakhasimende ekhaya aphesheya ukuza futhi ukuxoxisana ibhizinisi, ukwakha ikusasa elingcono!